यौ,न स म्प र्कबाट श्रीमती स’न्तुष्ट भए नभएको कसरी थाहा पाउने ? : डाक्टर यस्तो भन्छन – Ujyaalo Patrika
तपाईंकी श्रीमती सन्तुष्ट नभएकै हो वा तपाईंलाई त्यस्तो लागेको मात्र हो भन्ने कुराअनुसार फरक–फरक समाधान हुन सक्छ । तपाईंकी श्रीमतीमा यौ, नेच्छा बढी भएको पनि हुन सक्छ । यो कुरा तपाईंहरूबीचको सम्बन्धको सुमधुरता मात्र होइन, शा’रि’रीक तथा मा’नसिक स्थितिमा पनि भर पर्छ । महत्वपूर्ण कुरा के छ भने यौ,नस,म्पर्कवाट मात्र महिलाले यौ, न स, न्तुष्टि प्राप्त गर्ने होइन । महिलाले कसरी यौ, न सुख प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा ध्यान दिने मात्र होइन, त्यसमा संलग्न पनि हुनुपर्छ ।
महिलाको सबैभन्दा यौ,न सं, वे दनशील अङ्ग ‘भ, गा ङ्कुर’ बाहिरतिरै हुन्छ । त्यसलाई हात वा औंलाले च’लाएर यौ, न च, रमसुख प्राप्त गर्न सहयोग गर्न सकिन्छ । यो,नि अर्को महत्वपूर्ण अ, ङ्ग हो । यसको बाहिरतिरको भाग यौ, न संवे, दनशील हुन्छ । यो, निमा केही पसाई त्यसबाट घ’र्ष ण गराएर आ’नन्द प्राप्त गर्न सकिन्छ । स्त, न तथा अन्य यौ, न संवे, दनशील अ, ङ्गको मर्दन, घ’र्षण अनि च’लाउने जस्ता क्रियालापमा संलग्न हुन सकिन्छ । त्यसबाहेक अन्य नयाँ प्रयोग गर्न सकिन्छ । यौ,न क्रियाकलापमा संलग्न हुँदा पा’क्क्रीडामा संलग्न भए यौ, न उत्तेजना प्राप्त गर्न र च, रमसुखसम्म पुग्न सजिलो हुन्छ।
यसले यौ, नसम्प र्कमा संलग्न दुवै जनालाई साथसाथै च, रमसुख प्राप्त गर्न मद्दत गर्छ । दुवैले एकसाथ च,रमसुख प्राप्त गर्नु सजिलो कुरा होइन र यही नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । साथसाथै च,रम सुख प्राप्त भएन भनेर पीर गर्नुपर्ने आवश्यता छैन, पालैपालो यौ, न चरमसुख प्राप्त गरे पनि हुन्छ ।
Previous के तपाई टिकटक चलाउनुहुन्छ ! अब यी ५ तरिकाले टिकटक बाट कमाउनुहोस लाखौ : यसरी हुन्छ टिकटक आम्दानी जन्नुहोस . . .